दीर्घ कोभिड: बिरामीमा लक्षणहरू कस्ता कस्ता पाइएका छन्? - BBC News नेपाली
कोरोनाभाइरसबाट निमोनिया भएको फोक्सोको तस्बिर
काठमाण्डूकी लाक्पा शेर्पा भर्‍याङ उक्लँदा हिजोआज फतक्कै गल्न थालेकी छन्।
कति पटक त दुई खुड्किलो उक्लिएपछि थचक्क बसेको सुनाउँछिन् उनी।
कोभिडबाट सङ्क्रमणमुक्त भएको २ महिना बित्यो तर उनमा थकान उस्तै छ।
उनी भन्छिन्,"अस्पतालमा बस्दा बरु रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ठिक हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर यो त कहिले पनि ठिक नहुने समस्या रहेछ जस्तो लाग्दै छ।"
डाक्टर शेरबहादुर पुनले शेर्पाजस्ता धेरै बिरामी हेरेका छन्।
एक जना बिरामीले उनीसँग भनेका थिए- "मेरो अङ्गभङ्ग भएको छैन। हेर्दा ठिक देखिन्छु। खाना खान्छु, हिँड्छु तर भित्रभित्रै मलाई निकै गाह्रो भएको छ। सामान्य जीवन जिउनै सकेको छैन।"
कोही शारीरिक समस्या लिएर आउँछन्। कोही मानसिक रूपमा गलेर।
कोभिड-१९ निको भएपछि पनि केही बिरामीको स्वास्थ्यमा निरन्तर वा केहीमा तीनदेखि चार सातापछि समस्या देखिएको छ।
यस अवस्थालाई 'लङ' अर्थात दीर्घ कोभिड भन्ने गरिएको छ।
दीर्घ कोभिड भनेको के हो?
"कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) बाट सङ्क्रमणमुक्त भएपछि पनि केही समयसम्म मानिसहरूमा सङ्क्रमणको लक्षण एवं अन्य स्वास्थ्य समस्या देखिन्छ भने त्यो दीर्घ कोभिड हो," डाक्टर पुनले भने,"ती समस्या शारीरिक एवं मानसिक दुवै खालका हुन सक्छन्। र, निरन्तर लामो समयसम्म सताउन सक्छ।"
नेपालमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सङ्क्रमण दर ह्वात्तै बढ्यो।
त्यससँगै दीर्घ कोभिडको समस्या पनि व्यापक बनेको बताउँछन् त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर नीरज बम।
उनी अस्पतालको कोभिड-१९ व्यवस्थापन समितिका 'फोकल पर्सन' हुन्।
त्यसताका सङ्क्रमणमुक्त भएर गएका अधिकांश बिरामी हाल आकस्मिक एवं बहिरङ्ग वार्डमा धाइरहेका छन्, लङ कोभिडको लक्षणसहित। "केही बिरामी उपचाररत छन्। केही प्रतीक्षारत छन्। हामी बिरामीको स्वास्थ्य स्थिति र आवश्यकता हेरेर सेवा दिइरहेका छौँ", डाक्टर बमले भने।
के हुन् लक्षण? कस्ता छन् समस्या?
अधिकांशले अत्यधिक थकान, शरीर तात्ने, जोर्नी दुख्ने, रिङटा लाग्ने, अरुचि, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ र कपाल झर्ने समस्याबारे बताइरहेका छन्।
धेरैले मुटु ढुकढुक हुने, निद्रा नलाग्ने, डर र तनाव बढेको सुनाएका छन्।
कोरोनाभाइरस महामारीकाबीच कोभिड बाहेकका बिरामीको 'बेहाल'
डाक्टर बमका अनुसार सङ्क्रमण हुँदा आइसियु र भेन्टिलेटरबाट घर फर्किएका केही बिरामीहरूको शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पुनः घटेको छ।
श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएर शिक्षण अस्पताल पुगेका बिरामीहरू मध्ये केहीलाई 'हाइ फ्लो अक्सिजन'को सहायतामा उपचार गराइरहेको बमले बताए।
"सङ्क्रमण हुँदा निमोनिया देखिएकाहरू फेरि बिरामी भएका छन्। उनीहरूको निमोनियामा फेरि सङ्क्रमण भएको हुनसक्छ", उनले भने,"यस्ता अवसरवादी सङ्क्रमण विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरस र फंगसका कारण हुन्छन्। नियमित वर्षा र मौसम परिवर्तनसँगै यो समस्या पीडितहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ।"
तस्बिर स्रोत, विकी बोर्न
सरकारी अस्पतालमा मात्र नभई निजी स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि लङ कोभिडका बिरामीहरूको सङ्ख्या बढेको बताउँछिन् पल्मनरी एन्ड क्रिटिकल केयर विज्ञ डा. रक्षा पाण्डे।
"फोक्सोको दाग मुटुको समस्याका कारण हो या मांसपेशी कमजोर भएर हो? भन्ने कुरा पहिचान गर्न अति आवश्यक छ। त्यसपछि उपचार र चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ," उनले भनिन्।
अस्पतालबाट सन्चो भएर फर्किएकाहरूमा त समस्या देखिएको छ नै। साथै घरमै एकान्तवासमा बसेका र सङ्क्रमणका कारण गम्भीर बिरामी नभएकाहरूमा पनि दीर्घ कोभिडको लक्षणहरू देखिएको डा. पाण्डेले जानकारी दिइन्।
पहिले बालबालिकामा मात्र देखिएको यस रोग हाल वयस्कमा पनि पहिचान भएको उनी बताउँछिन्।
"यस रोगका लक्षणहरू ढिला देखिन्छन् तर पहिचान हुनुभन्दा अगाडि देखि नै शरीरको विभिन्न अङ्गहरू सुन्निन्छन् र असर पार्छ," डा. पाण्डेले भनिन्।
उनका अनुसार लङ कोभिड भएका धेरैले कपाल झर्ने समस्याबारे गुनासो गरिरहेका छन्।
शरीरमा कडा रोग भएका कारण हर्मोनको सन्तुलन बिग्रिएको र त्यसको परिणाम कपाल झर्नुसँग सम्बन्धित भएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।
त्यस्तै धेरैमा अनिद्रा र छटपटी पनि देखिएको डा. ओझाले जानकारी दिए।
डाक्टरका अनुसार मानसिक स्वास्थ्य अवस्था हरेक व्यक्तिपिच्छे फरक देखिएको छ।
कोभिड खोपः 'कोशेढुङ्गा' भनिएको पहिलो खोपबाट ९०% सुरक्षा
"जटिल परिस्थितिमा शरीरले देखाएको प्रतिक्रिया हुन् यी समस्या। त्यसैले आत्तिनु पर्दैन", डा. ओझाले भने,"अवस्था प्रतिकुल रहेसम्म यस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन्। त्यतिन्जेल हामीले स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुमा जोड दिन आवश्यक छ।"
उनी भन्छन्,'अवस्था अनुसार कसैलाई परामर्शसँगै औषधि सेवनको पनि आवश्यकता पर्छ। केहीलाई परामर्श र स्वस्थ जीवनशैलीले नै यस समस्याबाट बाहिर निकाल्छ।"
के छ त उपचार प्रकिया?
नेपालमा हालसम्म 'दीर्घ कोभिड' गम्भीर समस्याको रूपमा पहिचान भएको छैन।
उनले भने,"हामीलाई एउटा निर्देशिकाको आवश्यकता छ जसले सङ्क्रमणमुक्त भएपछि समस्या देखिए कहाँ जाने, कसले परामर्श र उपचार दिन्छ भन्नेबारे प्रस्ट पार्नेछ। र, आवश्यक उपचारपछि बिरामीहरू काममा वा सामान्य दैनिकीमा फर्कन सक्छन्।"
"अस्पतालहरूमा पोस्ट/लङ कोभिड हो या होइन भन्ने पहिचान गर्न युनिट खडा गरी बिरामीको परीक्षण गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट समस्या अनुरूप चिकित्सक वा विभागमा रेफर गर्न सकिन्छ", पुन भन्छन्,"अब योजना मात्र होइन बिरामीलाई दीर्घकालीन असर नपरोस् भन्ने हेतुले पनि लङ कोभिडका लागि उपचार प्रोटोकलको खाका बनाइनु पर्छ।"
कहिलेसम्म रहन्छ दीर्घ कोभिड?
यो अनुसन्धानको पाटो भएको बताउँछन् डा. पुन।
उनी भन्छन्, "पहिलो लहरमा सङ्क्रमणमुक्त भएकाहरूले अहिलेसम्म पनि विभिन्न समस्याहरू कायम रहेको सुनाउँछन्, अहिले नै यति समयसम्म रहन्छ भन्ने अवस्था छैन।"
"अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले दीर्घ कोभिड सङ्क्रमणमुक्त भएको तीनदेखि छ महिनासम्म रहने देखाएको छ। यसको उचित व्यवस्थापनका लागि हामीकहाँ पनि अध्ययन आवश्यक छ," डा. पुनले भने।
त्यस्तै अन्य शारीरिक तथा मनोसामाजिक समस्याहरू कम गर्न चिकित्सकसँग नियमित परामर्शमा बस्ने, फलो-अपमा आउन बन्द नगर्ने, नियमित व्यायाम र सन्तुलित भोजन गर्ने हो भने असर अवधि कम गर्न सकिने सुझाव डा पाण्डेको छ।